Software A si loogu badalo archives roulette
Hadaad tahay aqoonyahan roulette oo aad rabto beddelasho si fudud dhammaan dukumiintiyadaada wareejinta dhabta ah, Roulette Spin Converter gabi ahaanba waa inuu ka mid ahaado qalabkaaga falanqaynta.
Waxaan u abuuray aaladdan ugu horreyn adeegsi shaqsiyeed, maadaama mararka qaarkood aan rabo inaan si dhakhso ah u tijaabiyo hababka ku lug leh ciyaarista fursadaha roulette qaarkood iyo mar kasta oo aan ka bilaabo kaydadka dhabta ah ee laga helo shabakadda qaab tiro ahaan ku saleysan soo saarista tirooyinka shaqsiyeed (23, 8, 19, 0, 12, iwm.) Waa inaan u beddelaa qaabka fursadda in la falanqeeyo, maxaa yeelay sida iska cad tani waxay si weyn u dedejisay geeddi-socodka falanqaynta ee xigay.
Xaqiiqdii, qiyaasi inaad rabto inaad tijaabiso habka lixda: haysashada joogitaan caadi ah oo leh hal lambar oo la heli karo waxay u baahan tahay waqti dheer oo falanqeyn ah, oo aan ku xusin xisaabinta aadka u adag qaladku had iyo jeer waa hareeraha!
Mahadsanid Roulette Spin Converter Sidaa darteed waxay noqon doontaa suurtagal in lagu beddelo adigoo gujinaya guji dhammaan kaydadka markii hore ka koobnaa hal lambar, kaydadka si toos ah looga sameeyay qiyamka fursadaha aan dooneyno inaan falanqeyno.
Beddelashada kaydka: sida loo isticmaalo Roulette Spin Converter?
Roulette Spin Converter runtii way fududahay in la isticmaalo: badhanka load dhanka bidix waxaa suurtagal ah in lagu rakibo ama lagu keydiyo armaajo qaab feyl ahaan u qoran.
Kadib kaliya dooro qaabka aan rabno beddelasho lambarrada la soo raray; qalliinkan waxaad kala dooran kartaa 7-da xulasho ee soo socda:
► Xitaa qariib
Marka tan la sameeyo guji batoonka Isbedel iyo, cafi ciqaabta ... waa intaas!
Roulette Spin Converter: dhoofinta xogta
Joogitaanka isbeddelay oo diyaar u ah in la badbaadiyo wuxuu ka muuqan doonaa midigta barnaamijka (badhanka) Save midig) qaab qoraal txt ah, oo waliba wax laga bedeli karo iyada oo loo marayo Excel ama barnaamijyo kale.
Oo hadaan rabno inaan abuurno daa'in been abuur ah, kaliya gali tirada wareegyada si aad uhesho oo aad gujiso badhanka RND Jen.
Shaqadan waxaad sidoo kale abuuri kartaa joogitaan la'aan eber, xaaladdan oo kale sanduuqa ku habboon waa in lagu saxaa Ka reeb eber.
Sida aad u aragto, sahlanaanta isticmaalka barnaamijku waxay si toos ah ugu habboon tahay waxtarkeeda iyo wixii ka sarreeya dhammaantood wakhtiga ay ku badbaadin doonto marka ay tahay inaad tijaabiso nidaamka roulette ee ku saleysan mid ka mid ah 7 fursadood ee la heli karo. Maxaad sugeysaa inaad ka soo degsato xiriirka hoose?
Soo Degso Fayl	RSConverter.zip - 1 MB
Sida loo furo goobaha khamaarka la xanibay adoon bedelin dns
Sida loogu guuleysto sharadka khadka tooska ah ee sharad toos ah